Berlin ngeenxa zonke "kwikona" ★ iinkwenkwezi ebumnyameni, indalo enyulu
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEike
Indawo entle yeeholide kwindalo enendawo enkulu yomhlaba. Indlu ezimeleyo enokusebenziseka ngokupheleleyo inama-68 eemitha zesikwere kwaye inamagumbi okulala ama-2 kumgangatho ongaphezulu oneebhedi ezi-3 ezingatshatanga, igumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari, igumbi lokuhlala elipholileyo elinendawo yokutyela kunye nekhitshi langoku eline-oveni, umatshini wokuhlamba izitya kunye nefriji.
Zonke iindwendwe zamkelekile kuthi. Asidlulisi nje kuphela iholide yeholide, kodwa kunye nemvakalelo yokhuseleko, umoya wentsapho kunye nethuba lokutshintshiselana ngemibono nathi. Sivuleleke kwizinto ezinokuguqulwa.
Ukuba ujonge uxolo kunye nokuzola ukuphumla kunye / okanye ufuna ukuba kufutshane nesixeko esikhulu, ungayifumana apha. Kukwakho nehlathi elininzi kunye namachibi ambalwa ngaphakathi kwi-15 km yeradiyasi. Unokujonga okuninzi apha ngebhayisekile.
Iikhilomitha ezingama-30 ukuya eBerlin Alexanderplatz
Iikhilomitha ezingama-34 ukuya kwizilwanyana, ukuphumla kunye nepaki yedayinaso eGermendorf
12 km ukuya eHellsee, 10 km ukuya eLiepnitzsee, 12 km ukuya eWandlitzsee,
I-14 km ukuya kwi-Rahmer See, i-10 km ukuya kwi-Goriensee
Kukho iinketho ezahlukeneyo zokuthenga izinto zemihla ngemihla.
Yiba nguAldi, uRewe, u-Edika, uNorma, iNetto okanye iBahnhofspassage yethu, isikwere semarike kunye nayo yonke into engaphakathi kwiradius emalunga ne-5 km.
Iivenkile zokutyela kunye neecafe ziyakumema ukuba uhlale.
Sineforamu yezemidlalo (ukufaneleka kunye nokuba sempilweni) kubahlobo bentenetya okanye kwabo bakhetha ukuqubha echibini langaphakathi.
Iindwendwe zethu zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nathi. Ukuba undwendwe lungathanda uxolo noxolo, siya kukuhlonipha oku. Intlalontle yondwendwe ibalulekile kuthi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bernau bei Berlin